I-CASA LOBO-XL-Tajamares de la Pedrera- Iklabhu yabucala - I-Airbnb
I-CASA LOBO-XL-Tajamares de la Pedrera- Iklabhu yabucala
Tajamares de la Pedrera, Rocha, Uruguay, Rocha/ Región La Paloma, Uruguay
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNadia Ericka
UNadia Ericka yi-Superhost
ICASA LOBO yindlu enamagumbi aliqela ekwicomplex engamahektare ayi-80, ejongene noLwandle nehlathi, imizuzu elishumi ngemoto ukusuka eLa Pedrera Spa.
Indawo ekuyo indlu inento ethile: inqunyanyiswe yintaba yemithi endala kakhulu kunye nezihlahla, malunga neminyaka eyi-200, eyenza indalo apho iintlobo ezininzi zeentaka kunye nezityalo zidibana khona.
Enye yezakhiwo zokwakha ibingachukumisi imithi, kodwa ibingeyinxalenye yendlu. Esi sakhiwo sisiqwenga esiyi-2 esenziwe ngesamente, esinye senziwe ngesamente, esinye senziwe ngomthi, ibe esinye senziwe ngesangqa sangaphandle, apho sithathwa khona kwisityalo esiqala ukusihlasela ukuze siyigubungele ngaphakathi entabeni. Ivumelekile ukuba inqumla ngesibane esivulekileyo ehluza imithi, isandi seentaka kunye nomoya wolwandle.
Akukho ngcamango ngegadi ephandle endlwini ngaphandle kwendawo yangaphakathi entabeni. Ngaphandle kokuthandabuza, kusenokuthethwa ukuba le ndlu “ ayibonakali”.
Eli khaya lale mihla lokwakha liqinisekisa iintsuku ezipholileyo phakathi kobushushu obungathethekiyo basehlotyeni, kunye nemiphakathi etofotofo nepholileyo phambi kwendawo yomlilo kwizitovu zeenkuni zasebusika.
Ziiskwe mitha eziyi-150 kumgangatho omnye. Iqonga elahlulahluliweyo laba yikhitshi, igumbi lokuhlala, amagumbi okulala ayi-2, igumbi lokuhlambela elinye, ishawa engaphandle engaselwandle kunye nendawo enkulu yokujonga, enye ikwindawo enekhitshi elincinci negumbi lokuhlambela labucala, umdibaniso wayo yindawo yokuhlala enegrili.
Yindlu ebukekayo, njengoko yenzelwe ukuzifaka kwindawo eyingqongileyo kwaye yabelana ngayo ngaphakathi endlini, evula phandle kwiifestile ezinkulu.
Eyona nto ibalulekileyo kukuchitha ixesha apho kunye nosapho okanye abahlobo, yiloo nto iindawo zentlalo zisebenzisa kakhulu le ndawo nazo zonke izinto ezikhuselayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nadia Ericka